I-Vampire Makingover ye-Halloween
Ngomhla weHalloween, amantombazana amancenga amaqela adlalayo afuna imibono enomdla wokudala umfanekiso wesidlo. Ngokuqhelekileyo ukhetho luya kumfanekiso wesigane samabhinqa, lufake isilingo esisongela ubomi, kunye nesityholo esisongelayo. Iimpampu zenziwe nge ntombazana e-Halloween yinto ebalulekileyo njengengubo kunye nekhanda. Nangona kubonakala kube lula ukwenza, le ndlela yokwenza idinga ulwazi oluthile. Indlela yokwenza i-vampire yokubuyisela i-Halloween ukumangalisa abanye?
Ngona i-vampire elula kakhulu yokwenza iHalloween iqala ngetoni yokulinganisa ubuso. Njengoko uyazi, ukuhamba ngezintambo akunakuziqhayisa nge-pink blush, oku kuthetha ukuba ukudala umfanekiso wesipampu uza kuyidinga isiseko esilula okanye ipayipi emhlophe. Nangona kunjalo, ngaphambi kokusebenzisa naziphi na iindlela ezicetywayo, kuyimfuneko ukuphucula isikhumba kunye nemaski kunye ne-concealer yeziphene ezincinci (iimbombo ze-vascular, impimples, ubomvu). Kuya kwisiseko sokubeka isicu, kungcono ukusebenzisa isiponji esonyiweyo. Emva kokuba usebenzise isiseko, uphepha ubuso ngobuncwane obukhunileyo ukuphepha ukuphazamiseka ekuphakameni kweqela.
Ngokungafani neminye imifanekiso yemimoya emibi, i-vampire yesibhakabhaka iyisiqhelo, iyancenga, ibulawe, ngoko ke amehlo akhe kufuneka aphendule. NgeHalloween, nayiphi na indlovukazi yee-vampires kufuneka yenze i-eye makeup ngokusebenzisa izithunzi zamnyama. Isisombululo esona sisisombululo sokwakheka kwe-smoky-eyes with line extension of growth eyelash. Ngendlela, izithunzi azikwazi nje kuphela zimnyama okanye zimpunga. I-shades ye-plum egcweleyo, i-dark violet kunye ne-deep emerald iyakwazi ukujonga ubunzulu obungaqondakaliyo. Kwaye, ewe, i-eyelashes, enokuba yinto engokwemvelo, kodwa ipeyinti kwimigangatho emininzi, nangaphezulu.
Esinye sezibonakaliso zesimilo somfanekiso wempampu sibhekisiwe. Ukuthenga amazinyo aseplastiki akuyona ingxaki, kodwa ukwenzela ukuba kubonakale kuhambelana kwaye kungabonakali, kufuneka batshaywe. Ukwenza oku, ungasebenzisa i-lipstick ebomvu ebomvu, esetyenziselwa ukwenza umlomo , okanye utywala lwegazi olubekwe ngopende olubomvu. Ukuba ufuna ukugxila ekuphatheni komfanekiso, kwaye kungekhona ubulili bawo, imilomo ingachazwa ngekristal.
Iifake zeHalloween - Ipholethi
Indlela yokugqoka ibhanti yeesitokisi?
Ukhangeleka njani umzobo kwaye ubiza?
I-Photoshoot ebusika ehlathini
I-Lace yase-Ireland - iingubo zokugqoka
Iingcamango zokutshulwa kwesithombe kubantwana
I-tsvetotyp entwasahlobo - indlela yokukhetha i-wardrobe yohlobo lombala lohlobo lwembali?
Amakhukhamba amnandi e-busika - zokupheka okumnandi kunye neyokuqala zokulondoloza imifuno
Iibhontshisi zezinyosi ezidibeneyo
Umkhuhlane wamathambo kubantu abadala - iimpawu kunye neyeza
U-Natalie Portman unokukhanyela ubumi base-Israel
Ingubo yasebusika ephantsi
Ukucamngca ukuheha imali
Ibhokisi kumavili ane-handle out out
Itafile yokutya eyahlukileyo
Indlela yokukhulisa ama-oyster ama-mushroom kwi-stumps?
Ukutya kunye ne-gastritis nge-acidity ephezulu
Umtshato usondele kwinqona: Intombi kaJoshuwa Jackson ithole umtshato osindelwe ixesha elide
Ukucoca ikhefu kwizinwele ezinde
Utamatisi onamathanga kunye ne-basil
Iimfihlelo zokuvumelanisa kwindoda yokuqala ye-USA
U-Kristen Stewart udayile i-blonde
Ungammisela njani umntu?
Omelette - umxholo wekhalori
Cystitis ngexesha lokukhulelwa
Iintyatyambo ezivela kwiintambo ngezandla zazo